China Yuchai injini dhiziri jenareta Factory Mugadziri uye mutengesi Walter
FOB Mutengo: US $ 1 000 - 30,000 / Set
Kupa Mazano:4000 Set / Sets pagore
Yuchai injini dhiziri jenareta Fekitori, Wholesale Yakasiyana Yakakwirira Mhando Yuchai injini dhiziri jenareta Fekitori Zvigadzirwa Kubva kuYangzhou Walter Electrical Equipment Co, Ltd. Yuchai injini dhiziri jenareta Fekitori Vatengesi uye Yuchai injini dhiziri jenareta Fekitori.
Kupa Mazano: 2000 Pagore
Mini Uwandu: 1 seti
Zvinhu: Iron & mhangura
Mafomu: Gadzira Magetsi
Vatengi: mutengesi / mugadziri / kambani / fekitori / muparidzi / mumiririri / wekupedzisira mushandisi
Nzvimbo Yekutengesa: Asia, Africa, Europe, dunhu reArabhu
Yuchai injini Diesel jenareta Kurudzira Simba, ndapota tinya rinotevera simba
Walter - Yuchai akateedzera injini inobva kuGuangxi Yuchai Engine Co., ltd, iyo yakakosha muInjiniya Mashini, michina yezvekurima, kugadzira magetsi uye injini dzemumugodhi wedhiziri, simba renzvimbo iri 40-880 KW, zvakare injini yemhando: YC4108,, YC4110 , YC6105, YC6108, YC6112 akateedzana, Injini yedhiziri yakapfuudzwa kuyedzwa kwemweya, zvese zvinoenderana neyakajairwa nyika nyowani GB17691-2001 Rudzi Rokubvumidza Stage A miganho yekubuda (kusangana nezvinodiwa zveEuropean standard I) uye mamwe mamodheru anosvika kuEurope II .
Yakajairwa kugadzirisa ye yuchai jenareta set:
2.Walter alternator (china brand alternator yesarudzo)
4.high yepamusoro hwaro.
5.Anti-Vibration vakatasva System
6.Bhatiri uye bhatiri ndiro
7.Industrial silencer uye inochinjika chiutsi hosipaipi
Yuchai Set jenareta Kubatsira:
2. Simba rakasimba, kugadzikana kuita
3. Operation iri nyore uye chengetedzo
4. YUCHAI GENRARTOR ichave iri nyore kwazvo kugadzirisa uye kugadzirisa, iine yakasimba kuita uye hwakareba hupenyu hwebasa, saka kuita kwemutengo kwakakwira.
5. Fekitori yakananga kutengesa jenareta seti, Simbisa mhando uye yakachipa jenareta mutengo, ita yakawanda purofiti kugumisa vatengi
6. Iine ISO9001 CE SGS BV certification
7. Diesel jenareta Spare zvikamu zviri nyore kuwana kubva pasirese musika nemutengo unodhura zvikuru
Jenareta Model Gengerator Prime Simba Gengerator Yakamira Simba Yuchai Injini Stamford Alternator L * W * H Kurema
KVA KVA Injini Muenzaniso Alternator Muenzaniso mm kg
Walter jenareta akaisa ANOSHANDISA iyo yemhando yepamusoro chigadzirwa, usatarise zvese zvakadzama, kusangana nezvinodiwa zve genset iwe zvaunoda.
Dhizaini → CNC kubaya → Welding → Bvunzo → Kuungana → Makorari → Ready majenareta → Encasement → Kununura
Kubva pane dhizaini kuenda kugungano uye wozotumira iyo unit, nhanho yega yega yatinoda kuti vashandi vedu vadzore hunhu zvakanyanya, kuitira kuti chikamu chega chega chigone kununurwa zvakakwana.
Maawa makumi maviri nemaviri online service
Kubvunza kuchapindurwa mukati me1 awa
Garandi igore rimwe kana maawa anoshanda chiuru, anouya kutanga
CKD uye SKD zviripo
Zvikamu zvejenareta zvinowanikwa zviri nyore
Ndichiri kuwedzera musika wepamba nguva dzose, zvigadzirwa zvedu zvakaendeswa kuEthiopiya, Algeria, Poland, Mexico, Bolivia, India, New Zealand, Ecuador, Russia, Philippines, Vietnam, Libya, Ghana, India, United Arab Emirates, Saudi Arabia, Syria. , Brazil, Nigeria, South Africa, nezvimwewo Tine mugove mukuru mumusika wepasi rose uye tinonakidzwa nemukurumbira mukuru pasirese.
1. Sarudzo yemidziyo yemhando;
2.Kugadzira uye kugadzira michina zvichibva pane zvakatarwa nevatengi.
Kutumira nyanzvi mushure mekutengesa sevhisi yevashandi vepa-saiti kutarisika uye kugadzirisa dambudziko, uye mashandiro evashandi ekudzidzisa zvakare.
1. Nyanzvi yehunyanzvi uye mushure-yekutengesa sevhisi timu ine 7/24 sevhisi yekugadzirisa dambudziko rako;
2. Spare zvikamu zvekugovera.
Walter kuburikidza nemakore gumi nematatu emiedzo nematambudziko, isu tinoshanda nesimba uye ziya kuti tiwane ese marudzi emabhizimusi chitupa, mvumo.
Kavha Details: Genaral kurongedza kana plywood kesi
Dhizaini Yekutumira: Kutumirwa mumazuva gumi mushure mekubhadhara
Kana iwe uchida zvigadzirwa zvedu, ingo taura nesu.
Kufara kwangu kukupa iwe rese ruzivo iwe rwaunoda uye zvine musoro.
Isu tiri muYangzhou guta, China. Welcome kutishanyira!
Kana iwe uchifarira kambani yedu zvimwe zvigadzirwa, ndapota tinya pamufananidzo uri pamusoro.
Anodiwa Changamire Kana Mutengi Wekutenga:
Kutenda nenguva yako kuverenga yedu yedhiziri jenareta webhusaiti zvakanyatsonaka, kana iwe uine yako dhizaini kana zvakadzama zvinodiwa, iwe unogona kutitumira isu iyo e-mail.
Zvakare kana iwe usingazive iwo chaiwo madhaidhi, iwe unogona kutiudza isu chako chinodikanwa, sesimba rejenareta, voltage uye frequency, mangani maseti? Iyo inoshandiswa kufekitori kana erevheta kana zvimwe zvishandiso? Saka kuti isu tinogona kukurudzira imwe kwauri.
Zvakare iwe unofanirwa kutiudza iro guta raunobva, kuti tikwanise kutarisa voltage uye frequency tisati tagadzira.
Pls tumira tsamba kune walterxinyi@gmail.com
Ndinokutendai zvakare nezvenguva yenyu uye tariro bhizinesi pamwe chete kune misika mikuru yedhiziri jenareta
Walter Magetsi Midziyo inowana muYangzhou Guta ndeimwe yeinotungamira China dhiziri jenareta vagadziri uye vanotengesa, uye sekambani yehunyanzvi, isu tine yedu fekitori inobereka, iyo inokwanisa kugadzira yakanakisa uye nyowani 40kva Yuchai injini dhiziri jenareta, 50kva Yuchai injini dhiziri jenareta, 75kva Yuchai injini dhiziri jenareta, 100kva Yuchai injini dhiziri jenareta, 120kva Yuchai injini dhiziri jenareta, 150kva Yuchai injini Diesel jenareta, 151kva Yuchai injini Diesel jenareta, 180kva Yuchai injini Diesel jenareta, 200kva Yuchai injini dhiziri jenareta, 250kva Yuchai injini dhiziri jenareta, 300kva Yuchai injini dhiziri jenareta, 350kva Yuchai injini dhiziri jenareta, 400kva Yuchai injini Diesel jenareta, 440kva Yuchai injini Diesel jenareta, 500kva Yuchai injini Diesel jenareta, 550kva Yuchai injini Diesel jenareta, 600kva Yuchai injini Diesel jenareta, 640kva Yuchai injini dhiziri jenareta, 700kva Yuchai generator injini dhiziri jenareta, 750kva Yuchai injini dhiziri jenareta, 800kva Yuchai injini dhiziri jenareta, 880kva Yuchai injini dhiziri jenareta, China, vagadziri, bhizimisi, fekitari, kambani, wholesale, kutenga, mutengesi, kutengesa, zvakachipa, kugovera, kugovera
Pashure: Shangchai injini dhiziri jenareta Kambani
Zvadaro: CUMMINS yegungwa jenareta Sets
500kva Yuchai injini dhiziri jenareta
350kva Yuchai injini dhiziri jenareta
200kva Yuchai injini dhiziri jenareta